Semalt: GrabzItangariro. Nzira dzakasiyana dzekushandisa GrabzIt
Pane zvakawanda kurasa web uye purogiramu dzekuwedzera dhadhi paIndaneti. Zvisinei, kurasa data kubva pamafuta akasiyana-siyana e PDF uye mapeji ewebhu hazvina kumbova nyore zvakanyanya sezvazviri ikozvino! Ndapota danana uye ratidza nyasha, GrabzIt - imwe yezvakanakisisa uye zvakakurumbira zvekutsvaga zvishandiso zvebhu webhu mumutsetse.
Pane nzira ina dzinokosha dzokushandisa iri webhupu yekutsvaga webhu
1. Shandisa API yacho:
Unogona kushandisa API yekubatanidza GrabzIzvizivo uye zvibvumirano mumushandi wako kana webhusaiti. Izvi zvinokubvumira kuwana zvifananidzo, kutora ma tafura e-HTML, uye kutora mavhidhiyo ari muIndaneti mumaGIF mavara. Iwe unogona kushandisa zvakare API kuti ubvise zvinyorwa kubva kumashoko eWe uye PDF - alice in wonderland slot machine.
2. Shandisa iri paIndaneti Screenshot Tool:
Kana uri kutarisa kuti ugadzire zvinhu zvakarongwa, unoda kutora zvidzidzo, kana kuti zvimwe zvirongwa zvekutora HTML tafura, GrabzIcho chisarudzo chakanaka zvako. Kushandisa-kushamwaridzana uye kwakakosha mu-online screenshot option inokubvumira kutora nekuchengetedza zvikwangwani mukati mehurukuro yemaminitsi.
3. Shandisa ma Plugins:
Unogona kushandisa purogiramu yaGrabzIkubatanidza zvinhu zvakajairika zvakagadzirwa kare muwebsite yako, bhulogi kana zvigadzirwa zvehutano.
4. Shandisa yekushambadzira yewebhu kana kudhonza kwemigodhi:
Imwe nzira yekubatsirwa kubva kuGrabzIkushandisa shanduro yekutsvaga yewebhu kana kudhonza kwemigodhi uye kubvisa chero dhidhiro chero ipi zvayo yaunoda..
1. Tsvaga mawebsite anotsvaga:
Ne GrabzIt, zviri nyore kwauri kuti uzive chinangwa chako mapeji ewebhu. Iwe unongofanira kuikora, kuisa uye kushandura webhu ino yekare uye kutsanangura webhusaiti kana chikamu chebhuku raunoda kupedza data kubva. Zvadaro, unofanirwa kuronga apo iwe uchida kuti deta yako ive yakatsvaga uye rega GrabzIt iite zvese.
2. Tsanangurai deta kuti ibvise kana kupera:
Zvakakoshawo kutsanangura kuti iwe unoda sei kuti deta yako igadzirwe kuitira kuti GrabzIchengetedze kuchinja zvakakodzera.
3. Paseka yakatsvaga deta:
Izvi zvinosanganisira kutsanangura nzira yaunoda kuti deta yako iite uye inoparidzirwa. GrabzIchakubatsira iwe kupeta data yako kana webhuti yehupenyu nenzira iri nani.
Ndedzipi dheta inogona kuiswa?
GrabzInogona kupedza data kubva kune imwe nzvimbo yewebhu peji. Kunyangwe iwe uchida kubvisa zvinyorwa zve HTML elements (zvakadai se span uye div), vanoda kuwana humbo hweHTML hunhu, kana kuva nehanya mukuchengetedza zvinyorwa mu PDF kana mufananidzo wemifananidzo, unofanira kushandisa GrabzIt!
Tsvina iyi inoita sei?
Inokubvumira kusarudza kana kusimbisa zvinhu zvepeji yewebhu iwe unogona kubvisa. Kana ukangosarudza nzvimbo yacho, GrabzIt ichaita zvinyorwa zvinowanzoitika uye inoparadzanisa ruzivo rumwe rwezvinyorwa kwauri. Iyo inokuitawo kuti ushandise maitiro uye unogadzira zvinyorwa nguva dzose mumushure, kukuwana iwe mhinduro dzinoda.
Nyaya inowanikwa nenzira yeExcel, CSV, JSON, XML, SQL uye HTML, uye iwe unogona kuchengetedza iyi data kana pa MySQL kana SQL server. GrabzIri kuuya neinoshamisa wizard inoward uye inogadzira mirayiridzo yezvinofanira kuputika uye nguva yekuraira. Iwe haudi chero mapurogiramu epurogiramu kana coding kuti uwane zvakanakisisa kubva pane iyi software.